Ngaphandle kokufaka imikhiqizo, i-Qilu ibuye igxile ekuklameni nasekukhiqizeni ukunemba okuhlukahlukene, ikhwalithi ephezulu yamabombo we-groove ball amabombo angama-60 nochungechunge lwama-62 ngosayizi webhola ka-3.969 mm no-4.763 mm, asetshenziselwa kakhulu izindwangu, izinjini zikagesi, izimoto, izinto zasendlini, amathuluzi kagesi, amaphampu, izithuthuthu, izimoto ezinzima, amathoyizi ezingane njll.
Kusukela kumasongo, ikheji, ibhola lensimbi kuya ku-grease, uQilu ukhetha imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu kuzo zonke izinyathelo ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende angayisebenzisa ngokukhululeka.
Indandatho ethwele i-Qilu nebhola kungukuhlanza okususa inhlanzeko ephezulu yekhabhoni enamakhasi aphethe insimbi i-GCr15, enokwelashwa okugcwele okuqinile ngensimbi yokwelashwa ngokushisa, lokhu kuqinisekisa ubulukhuni bokucima, kugcina ukumelana nomthwalo omuhle kakhulu, ukuqina nezimpawu zomsindo.
Ukwakheka kwamakhemikhali kwezinto ze-GCr15:
Ikheji elifanele likhiqizwa yishidi lensimbi eliphansi elibandayo.
Sisebenzisa i -tinplate ye-electrolytic encishisiwe ebandayo ye-shiled, engeyona enobuthi enezici ezinhle ekugxivizeni ukucubungula nokulwa nokugqwala, Isihlangu sidlala kahle ekuvikeleni uthuli, i-grease-proof-proof kanye nokuvikelwa komswakama njll.
Izinto zensimbi zenjoloba
Seal impahla irabha nitrile, okuyinto copolymer ka acrylonitrile-butadiene.It kuyinto isicelo kabanzi kabanzi uphawu njengoba ukusebenza yayo emihle kakhulu ukumelana uwoyela, kuyaqina, ukumelana nemihuzuko, amandla mechanical njll